ko htike's prosaic collection: ၂၁.၀၉.၂၀၀၇
တောင်ဥက္ကလာ ငွေကြာရံဘက်မှ ဆရာတော်များ အပါး ၁၅၀ ခန့် ရန်ကုန်မြို့တွင်းဘက်သို့ ချီတတ်သွားသည်။ ရန်ကုန်တွင် မိုးများ အတော် ရွာနေပြီး၊ တစ်ချို့ ဖုန်းလိုင်းများ ဆက်သွယ်၍ မရ ဖြစ်နေပါသည်။
mizzima သတင်းအရ မြောက်ဥက္ကလာမှ သံဃာတော်များလည်း ချီတတ်နေပြီဟု ဖတ်ရပါသည်။ http://www.mizzimaburmese.com/breaking_news.php
Friday September 21, 2007 6:46 AM
YANGON, Myanmar (AP) - Some 200 Buddhist monks stagedabrief demonstration in Myanmar on Friday, the fourth day of protests in the country, witnesses said. A day earlier, nearly 1,000 monks and thousands of citizens marched, the largest challenge inadecade to the iron-fisted junta that rules the nation.
Braving driving rain, about 200 monks converged at Mei Lamu pagoda on the outskirts of Yangon. After chanting sermons and praying for 15 minutes, the monks dispersed, witnesses said.
Posted by ကိုထိုက် at 07:38